Heinkel Yena 280 - iMfazwe Yehlabathi II Heikel Yena 280 uMqhawe
Imbali kunye neNkcubeko Iimfazwe kunye neenqwelo
Iinkcukacha (I-280 V3):
Ubude: 31 ft. 1 in.
Ukuphakama: 10 ft.
Indawo yephiko: 233 sq. Ft.
Akukho nto yokulinganisa : 7.073 lbs.
Isisindo esinzima : 9,416 lbs.
Isityalo: 2 × Heinkel HeS.8 turbojet
Ubungakanani: iikhilomitha ezingama-230
Max Speed: 512 mph
Ukubeka: 32,000 ft.
Izibhamu: 3 x 20 mm MG 151/20 isinki
Heinkel Yena 280 Uyilo kunye nophuhliso:
Ngo-1939, u-Ernst Heinkel waqala iminyaka yobudala kunye nenqwelo yokuqala yokuphumelela ye-178.
Ephumayo ngu-Erich Warsitz, i-178 yayinikwe injini ye-turbojet eyenzelwe nguHans von Ohain. Umdla omdala kwi-flight speed, uHeinkel wanikeza i-178 ukuya kwiReichsluftfahrtministerium (i-Reich Air Ministry, i-RLM) ukwenzela ukuvavanya. Ukubonakalisa inqwelo yeenkunzi zeRLM u-Ernst Udet no-Erhard Milch, uHeinkel wadana xa engabonakali umdla. Inkxaso encinane ingafunyanwa kubaphathi be-RLM njengoHermann Göring bakhetha ukuxhasa abaphambuli beenjini ze-piston.
Ingaphepheli, i-Heinkel yaqalisa ukuqhubela phambili kunye ne-fighter eyakhelwe injongo eya kubandakanya i-Jet technology ye-178 ye-jet. Ukuqala ngasekupheleni kwe-1939, le projekthi yayikhethwe ngu-180. Isiphumo sokuqala sasinqwelo-moya ebonakalayo kunye neenjini ezimbini ezibekwe kwi-nacelles phantsi kwamaphiko. Njengama-Heinkel amaninzi adiza i-He 180 ibonisa amaphiko ane-elliptically-shapedral kunye ne-twin fins kunye ne-rudders.
Ezinye iinkalo zoyilo zazibandakanya ukucwangciswa kweearricy gear kunye nokuhlala kwesihlalo sokuqala sehlabathi. Eyilwe yikomiti eholwa nguRobert Lusser, i-180 iqhotyoshelweyo yazaliswa ngehlobo le-1940.
Ngelixa iqela likaLusser lenza inkqubela phambili, iinjineli zaseHeinkel zazijongene neengxaki ngeenjini zeHeinkel HeS 8 ezazijoliswe ekuncedeni umloli.
Ngenxa yoko, umsebenzi wokuqala kunye neprototype yayingagqibekanga, i-glide imvavanyo eyaqala ngoSeptemba 22, 1940. Kwaye kwada ngo-Matshi 30, 1941, loo mqhubi wovavanyo uFritz Schäfer wathatha i-aircraft phezulu phantsi kwamandla ayo. Ukubuyisela kwakhona i-He 280, umqhubi omtsha wabonakaliswa ngo-Udet ngo-Ephreli 5, kodwa, njengokuba yena no-178, akazange akwazi ukufumana inkxaso yakhe esebenzayo.
Ngenye inzame yokufumana intsikelelo ye-RLM, u-Heinkel wayilungiselela indiza yokhuphiswano phakathi kwe-He 280 kunye ne-injini ye-piston- Focke-Wulf Fw 190 . Ukuhamba ngeklasi ye-oval, u-280 wagqiba ukupheka ezine ngaphambi kokuba i-Fw 190 igqibe ezintathu. Waphinda wahlaziya, u-Heinkel wachaza kwakhona i-airframe eyenza ibe yincinci kwaye ilula. Oku kusebenze kakuhle ngeenjini ze-jet ezisezantsi ezikhoyo. Ukusebenza ngemali engancinci, i-Heinkel yaqhubeka icoca nokuphucula iteknoloji yayo. NgoJanuwari 13, 1942, umqhubi wokuvavanya uHelut Schenk waba ngowokuqala ukusetyenziswa ngokufanelekileyo ngesikhundla sakhe xa ephoqeleka ukuba asiyeke.
Njengabaqambi behlukunyezwa nenjini ye-HeS 8, ezinye izityalo zombane, ezifana ne- V-1 Argus njenge-014 pulsejet zacatshangelwa i-280. Ngo-1942, inguqu yesithathu ye-HeS 8 yaveliswa kwaye yafakwa kwi-moya. Ngomhla wama-22 kuDisemba, omnye umboniso walungiselelwa i-RLM ebonisa inja ehlekayo phakathi kuka-280 ne-Fw 190.
Ngethuba lokubonisa, u-280 watshitshisa i-Fw 190, kwaye wabonisa ukukhawuleza nokukhawuleza. Ekugqibeleni wavuya malunga ne-280 ye-potential, i-RLM yalela iinqwelo-moya zokuhlola ezingama-20, ngokulandelelaniswa kwe-aircraft yokuvelisa i-300.
Njengoko uHeinkel waqhubela phambili, iingxaki zaqhubeka zibetha i-HES 8. Ngenxa yoko, isigqibo senziwa ukushiya injini ngokuya kwi-HES 011 ephakamileyo. Oku kwaholela ekulibazisekeni kwiprogram ye-280 kwaye uHeinkel wanyanzelwa ukuba avume ukuba ezinye iinjine zeenkampani ziza kufuneka zisetyenziswe. Emva kokuvavanya i-BMW 003, isigqibo senziwe ukusebenzisa injini yeJunkers Jumo 004. Eyona mkhulu kunzima kuneenjini ze-Heinkel, i-Jumo yanciphisa kakhulu ukusebenza kuka-280. Inqwelo yendiza yaqala ukuhamba ngeenjini zeJumo ngoMatshi 16, 1943.
Ngenxa yokusebenza okuncitshiswe ngenxa yokusetyenziswa kweenjini zeJumo, i-He 280 yayingenakunzima kumncintiswano wayo oyintloko, iMeserchmitt Me 262 .
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, ngo-Matshi 27, uMilch wayalela uHeinkel ukuba acime iprogram ye-280 kwaye agxininise kwi-design bombber kunye nemveliso. Ethukuthelwe yonyango likaRLM we-280, u-Ernst Heinkel wahlala echukumisayo malunga neprojekthi de wafa ngo-1958.
Ukuba u-Udet noMilch babanjwe kwi-280 ye-1941, inqwelo yayiza kuba yinkonzo engaphambili kunomnyaka ngaphambili kunam Me 262. Exhotywe ngamanqindi amathathu engama-30mm kwaye anakho u-512 mph, i-280 yayiza kubanika ibhuloho phakathi kwe-Fw 190 no-Me 262, kunye nokuya ku vumela iLuftwaffe ukugcina ukuphakama komoya phezu kweYurophu ngexesha apho ii-Allies zingenalo i-aircraft efanayo. Ngoxa iinjongo zeenjini zenza i-He 280, le nto yayiyimpikiswano eqhubekayo kunye ne-injini ye-jet yokuqala eJamani.
Kwiimeko ezininzi, inkxaso-mali kaRhulumente yayingabikho kwizigaba eziphambili zophuhliso. Ukuba u-Udet noMilch babesekela ngokusisiseko isiza, iinjongo zeenjini zinokuthi zilungiswe njengenxalenye yenkqubo yeenjini ezandisiweyo. Ngethamsanqa i-Allied, oku kwakungenjalo kwaye isizukulwana esitsha se-piston-combat fighters sibavumela ukuba bathathe ukulawula kwezulu ukusuka kumaJamani. I-Luftwaffe ayiyi kululeka umqhubi we-jet osebenzayo kude kube ngu-Me 262, owabonakala kwimigangatho yokugqibela yemfazwe kwaye akazange akwazi ukuthonya kakhulu umphumo walo.
Imfazwe Yomlomo: I-Lockheed F-104 Starfighter
Imfazwe Yehlabathi II: Ukubuyisela Impindiselo
Imfazwe Yehlabathi II: UMartin B-26 uMthengisi
Imfazwe Yehlabathi II: Imfazwe yaseBrithani
Imfazwe Yehlabathi II: Curtiss SB2C Helldiver
Imfazwe Yehlabathi II: I-Hawker Typhoon
Imfazwe yaseKorea: MiG-15
Imfazwe Yehlabathi II: I-North American B-25 Mitchell
Adcorn State University Admissions
Isikhathi sokuya kwexesha - Ukuba nexesha lakho kwiFrentshi kunye neNzululwazi
Inkcazo yezifo eziqhelekileyo zemithi
Ngaba ukuGembula isono?
IYunivesithi yaseToledo GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Imfazwe Yehlabathi II: USS Nevada (BB-36)
Agasti - Umhla weAgasto ngowama-63-44 BC
Ubalo boBalo lwabaNtu baseMzantsi Afrika
Ilanga kwiPisces - Izibonakaliso zeZodiac
Iziganeko zeHola Mohalla
Ukuqhunjelwa kweBoming Flight 103 phezu kweLockerbie
Iimpawu eziphambili ze-Anime kwi-Blu-ray Disc: Iimpawu zamaFilimu